Ubude Futhi Ibanga Futhi isisindo Ukuguqulwa Amathuluzi | Londoloza Isitimela
Ubude Futhi Ibanga Futhi isisindo Ukuguqulwa Amathuluzi
Ikhaya > Ubude Futhi Ibanga Futhi isisindo Ukuguqulwa Amathuluzi
ubude Converter – isisindo ukuguqulwa – ibanga ukuguqula – Body Mass Index ukuguqulwa – amathuluzi lokushisa ukuguqulwa.
Smart Universal Units Ukuguqulwa Ukuze Ibanga, isikhathi, Amazinga okushisa Futhi okuningi
Lokhu jikelele ithuluzi unit Converter kuyokusiza ukuba ukuguqula ibanga, ukuguqula isikhathi, lokushisa lokuguqula, futhi nokuningi, masinya, Sebenzisa eyehlisela phansi ukukhetha iyunithi efanele ongayiguqula kusuka.
Isisindo Ukuguqulwa Ithuluzi
Lokhu amayunithi ukuguqulwa amathuluzi iwijethi kuzokusiza ukwenza kweyunithi ezahlukene izinsimbi kungakhathaliseki ukuthi uthayiphe zingabantu ngokushesha njengokukhanya Lightning, nje faka inombolo kwesokudla endaweni efanele futhi ibenze inkinobho ukuguqula.
Khetha Ingxenye Yesisindo
Gram Kilogram U-Ounce Iphawundi
Ubude Converter Isicelo
Elinye ithuluzi ezengeziwe iyunithi ukuguqulwa iwukuba obuphelele ukuguqulwa kanye nebanga ukuguqulwa amayunithi ngakho uma udinga ethize amabanga ungakwazi ukuguqula, it has wonke ongakhetha udinga ukubala futhi uguqule ibanga okukhulunywa.
Body Mass Index Ukuguqulwa App
Namhlanje wonke bayazi ngempilo yethu, ngakho nakuba wena eholidini, ujabulele futhi asebenzise yethu Body Mass Index – ithuluzi BMI Converter, ukuze ubone ukuthi usesekhona semzimbeni ngenkathi ukuzijabulisa.
Kuvumelekile ngeminyaka 20 noma emdala.
Thola okuningi ku Wikipedia
Izibonelo Of Lapho Ukusebenzisa Ukuguqulwa yethu Amathuluzi:
Kala ukuguqulwa mass nesisindo:
Lapho ingane yakho idinga ukuya coaster roller, ngezinye izikhathi uzocelwa isisindo sakhe at the zendawo isisindo isilinganiso, amathuluzi ethu amayunithi ngenhla Converter kuzokusiza ukuhlunga le Maze.
Ibanga kanye nobude Converter:
Ake sithi ufuna ukubala isikhathi esingakanani kuzothatha usuka umsuka eyodwa kuya kwenye, kodwa Nase sifike ezweni lapho ikhilomitha iyasetshenziswa, AYIKHO INKINGA, vele ufake ithuluzi ikhilomitha iyunithi, futhi ngeke ukuguqula lokho ujwayelene okuyinto kuleli cala, Kungaba amamayela.
Temperature ithuluzi amayunithi Converter:
Ufuna ukwazi ukuthi yini ukupakisha kohambo lwakho, futhi awazi uma Celsius noma Fahrenheit, noma kunjalo, Amayunithi yethu Converter, kuzokusiza uzulazule lawa manzi.
Nezingubo osayizi Converter:
Usufikile ke yezitolo ingxenye yohambo lwakho, futhi wena cha fanele bono, liyini isicathulo iyunithi, esinakho wena ikhambi ngawe, ukuxazulula le nkinga unit Converter ukuze uthole isihlangu kwesokudla, shirt kwesokudla, uphinde ubuye futhi ukubukisa kubangani bakho ukuthi yini waqhubeka nohambo zakho.
– Ziningi izibonelo ezengeziwe lapho ungakwazi ukusebenzisa amayunithi ethu converters, kukhona nje ezinye izimo.
Ngezinye Londoloza Isitimela thina njalo cabanga kwethu abafundi blog isitimela sokuvakasha nesitimela yokubhuka iwebhusayithi amaklayenti, ngakho enwetshiwe travel namathuluzi nokwenza kwethu sethule uhlelo amayunithi nenhle Converter izicelo ngawe ukuthola kube lula ukuguqula isisindo, kodwa futhi ukukwazi ukwenza isivinini ukuguqulwa, Ibanga ukuguqulwa kanye lokushisa ukuguqulwa, futhi abaningi amayunithi ngaphezulu ukuguqulwa ukuthi sihluke ezweni lakini lapho elibangise.
Ubude yethu Converter Futhi Ibanga Converter Futhi isisindo Converter Amathuluzi babe kulula ukuyisebenzisa interface ngakho ngeke isidingo sokuchitha ezingaphezu kuka 5 imizuzwana lapho seeings ezinye izinombolo iyunithi ezidinga kweyunithi ngakho ungenza izinqumo zakho ebalisisiwe fast and kahle.
Sinamathuluzi amaningi wakho:
Ikhalenda Leholide, thola izinsuku zamaholide zibe lula ngangokunokwenzeka.
Ithuluzi lesimo sezulu esipholile, Uma usekhaya futhi uzibuza ngemephu yesimo sezulu noma amadigri kwenye indawo, Lokhu ngokwakho.
Isihloli Sesikhathi Sendawo, ithuluzi enembile kakhulu ukuhlola isikhathi yonke indawo!
Isibali semali, ekugcineni isiguquli semali nesibali okulula ukusisebenzisa.
Isiqinisekisi seCarbon Footprint, wazi kahle ukuthi wenza malini ngeplanethi kuye ngemodi yezokuthutha oyikhethayo
Imephu Yezokuvakasha Game, sebenzisa indoda encane ephuzi, ukuhudulela kunoma yikuphi emhlabeni futhi ubone izithombe zangempela zokugqugquzela ukuhamba.
Uhlu lokuhlola lwabahambi, isicelo sokusebenzisana esikuvumela ukuthi ukhethe uhlobo lwakho lokuhamba nembangela, futhi ngokushesha nje lapho ufaka imininingwane, uzothola uhlu lokuhlola olunembile lokupakisha.
I-Calculator Yezindleko, Khetha izwe kusuka kokuya phansi, futhi ubone ukuthi kungakubiza malini ngosuku ukuhambela izwe ngalinye emhlabeni.
Izincwajana zemininingwane Game, Yiba ngumshayeli wesitimela bese ushayela izitimela lapho uya khona, umdlalo omnandi nowijabulisayo kuyo yonke iminyaka.
Iyakujabulisa Units yethu converters amathuluzi, esethemba ukuthi ukwenza, futhi uma wenza, sasiyojabula uma asisekele emuva bese usebenzise yethu zemininingwane ithikithi Engine esinomthwalo Kuhle futhi Eshibhe zemininingwane Amathikithi Amanani, Londoloza Isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka leli khasi ungene kusayithi lakho, vele uchofoze lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funits%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / noma / izilimi nl nokuningi.